မော်လမြိုင် - ဝီကီပီးဒီးယား
မော်လမြိုင်မြို့ တည်နေရာပြ မြေပုံ
ကိုဩဒိနိတ်: 16°29′N 97°37′E﻿ / ﻿16.483°N 97.617°E﻿ / 16.483; 97.617
မွန်၊ ဗမာ၊ တရုတ်၊ ကရင်၊ အိန္ဒိယနွယ်ဖွား
ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ
သံလွင်မြစ် - မော်လမြိုင် - မုတ္ထမ
မော်လမြိုင်မြို့ (မွန်: မတ်မလီု၊ အင်္ဂလိပ်: Mawlamyine (သတ်ပုံဟောင်း – Moulmein)) သည် မွန်ပြည်နယ်၏ မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့မှ ကီလိုမီတာ ၃၀၀ (၁၈၅ မိုင်) ကွာဝေးပြီး သထုံမြို့မှ ၇၀ ကီလိုမီတာ အသီးသီး ကွာဝေးကြသည်။ ဤမြို့သည် သံလွင်မြစ်ဝ၏ ဝဲဖက်ကမ်းပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး မြန်မာ့အရှေ့တောင် ဆိပ်ကမ်းမြို့တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်းသို့ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန် အဓိကနေရာကြီးဖြစ်သည်။ မော်လမြိုင်မြို့သည် ရှေးမွန်မြို့ဟောင်းကြီး တစ်မြို့ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကိုလိုနီခေတ် မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ပထမဆုံး မြို့တော် လည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ မော်လမြိုင်မြို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့တော်အသစ် နေပြည်တော်မြို့ မတည်ထောင်ခင် ၂၀၀၆ ခုနှစ်ထိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တတိယအကြီးဆုံးမြို့ ဖြစ်ခဲ့သည်။
မော်လမြိုင်မြို့၊ သံလွင်မြစ်လယ်ရှိ ခေါင်းဆေးကျွန်း
၂.၁ အေဒီ ၈ မှ ၁၈ ရာစု
၂.၂ အေဒီ ၁၈ မှ ၁၉ ရာစု
၂.၃ ကိုလိုနီခေတ် မော်လမြိုင်မြို့ (၁၈၂၄ မှ ၁၉၄၈)
၂.၄ လက်ရှိ မော်လမြိုင်မြို့ (၁၉၄၈ မှ ယခု)
၂.၄.၁ မြို့ပြ အမွေအနှစ် စောင့်ရှောက်ရေး
၄.၁ မီးရထား၊ ကား
၅.၁.၃ စတုတ္တသမီးတော်၏ ပြာသာဒ်ဂူ
၅.၁.၄ ယုဒသန်၏ ပထမနှစ်ခြင်းဘုရားရှိခိုးကျောင်း
၅.၁.၅ ရှင်မဿဲ အင်္ဂလိကန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
၅.၁.၈ စိန့်ပက်ထရစ် ရိုမန်ကက်သလစ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
၅.၁.၁၀ ဝိတိုရိယခေတ်ပုံစံ နာရီစင်
၆.၂ မော်လမြိုင် စက်မှုဇုန်
မော်လမြိုင်မြို့၏ အမည်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကို သမိုင်း၌ ဤသို့ဆိုလေသည်။
ယခင်က မော်လမြိုင်မြို့နေရာတွင် ဘုရင်တစ်ပါးအုပ်စိုးခဲ့သည်။ ထိုဘုရင်သည် သူတစ်ပါးနှင့်မတူဘဲ ပုံမှန် မျက်လုံးနှစ်လုံးအပြင် နှဖူးအလယ်တည့်⁠တည့်တွင် မျက်လုံးအပိုတစ်လုံး ရှိသည်။ ထိုမျက်လုံးတန်ခိုးနှင့် ဘုရင်ကြီးသည် သူ့တိုင်းပြည်နယ်နိမိတ်အတွင်းမှာ ဘာတွေဖြစ်နေသလဲ ဆိုတာကို အကုန်သိနေလေသည်။ တနေ့သောအခါ ယိုးဒယားရှမ်းများ စစ်မက်ပြုဖို့ရောက်လာကြသည်။ မွန်လူမျိုးများသည် ထိုင်းလူမျိုးများကို ရှမ်းဟုခေါ်ကြသည်။ ရှမ်းဘုရင်တပ်များ၏ လှုပ်ရှားမှု မှန်သမျှကို မွန်ဘုရင်က သူ့၏ မျက်လုံးတန်ခိုးဖြင့် အကုန်လုံးမြင်နေရလေတော့ ရှမ်းတို့၏ အစီအစဉ် အားလုံးကို ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ရှမ်းများသည် သူတို့၏ တပ်တွင်းမှာ သစ္စာဖောက် ရှိသည်ဟု ယူဆလာကြသည်။ ရှမ်းဘုရင်သည် သူ့၏ မှူးမတ်များကို မေးမြန်းသောအခါ အကြောင်းစုံကို သိရှိလာပါတော့သည်။ ရှမ်းများသည် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ညီလာခံကျင်းပခဲ့ကြသည်။ ထိုညီလာခံမှ နေပြီး သူတို့သည် မွန်ဘုရင်၏ တတိယမျက်လုံးကို ဖျက်စီးပစ်ဖို့အတွက် သူတို့၏ သမီးတော်ကို လက်ဆောင်ပဏ္ဍာဆက်သရန် သဘောတူညီလိုက်ကြသည်။ ရှမ်းများသည် သံအဖွဲ့စေလွှတ်ပြီး ဘုရင်မင်းကြီး၏ ဘုန်းတန်ခိုးတော်ကြောင့် သမီးတော်ကို လာရောက်ဆက်သပါကြောင်း ပြောကြားသည်။ မင်းသမီး၏ လက်ချက်ကြောင့် ဘုရင်ကြီး၏ တတိယမျက်လုံးသည် ဖျက်ဆီးခြင်းခံလိုက်ရသည်။ ထိုမျက်လုံးတစ်လုံး ပျက်သွားခြင်းကို အစွဲပြုပြီး ရှေးမွန်များက ထိုဘုရင်ကြီး အုပ်ချုပ်သောမြို့ကို မွန်ဘာသာဖြင့် မတ်မွဲလို လို့ခေါ်ဆိုကြသည်။ မတ်- ဆိုသည်မှာ မျက်လုံးဖြစ်သည်။ မွဲ-ဆိုသည်မှာ တစ်၊ လို-ဆိုသည်မှာ ပျက်စီးခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ မတ်မွဲလို ၏ မွန်လိုအသံထွက်က မွတ်မော်လုံမ် ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အခြားသော တိုင်းရင်းသားများက တုပခေါ်ဝေါ် ပြောဆိုလာသော အခါ မတ်မွဲလို မှနေ မော်လမြိုင် ဖြစ်လာသည်။
မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန် စံလွန်တော်မူပြီးသည်နောက် သာသနာနှစ် ၁၅၇ ခုတွင် ရှမ်းမင်းဆက် ပြတ်၍ မွန်မင်းတို့လက်ထက်သို့ကျရောက်သောအခါ ရာမညရာဇာမင်းသည် မူလမြို့တည်ရာမှ သံလွင်မြစ်၊ ဂျိုင်းမြစ်၊ အတ္တရံမြစ်နှင့် သောင်ရင်းမြစ်တို့၏ မြစ်လေးမြွာဆုံရာ ယခုမော်လမြိုင်မြို့ တည်ရှိရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ပြီးလျှင် မြို့သစ် နန်းသစ် တည်ထောင်စိုးစံတော်မူ၏။ မြို့၏အမည်ကို ရမ္မာပူရ၊ ရမ္မာဝတီဟူ၍ပင် ဘွဲ့ချည်သတ်မှတ်တော်မူသည်။ ရာမညရာဇမင်းသည်၄ နှစ်မျှ မင်းပြုပြီးသည်နောက် သာသနာနှစ် ၁၆၁ ခုတွင် နတ်ရွာစံသည်။ ထိုအခါ သားတော်ကြီး အိမ်ရှေ့မင်းသည်မွတ်ပိရာဇဟူသော ဘွဲ့ဖြင့် ထီးနန်းဆက်ခံ စိုးစံလေသည်။ မွတ်ပိရာဇမင်း၏ မျက်မှောင် နှစ်ခုအလယ်တွင် တင့်တယ်လှပသော မှဲ့ရှင်တလုံးပါသောကြောင့် မျက်စိ သုံးလုံးထင်ရလောက်အောင် ထူးခြားတော်မူရကား မွန်ဘာသာဖြင့် မွတ်ပိရာဇာ၊ မြန်မာဘာသာဖြင့် မျက်စိသုံးလုံး ဘုရင်ဟုခေါ်တွင်သည်။ ထိုမင်းလက်ထက် မြို့ပြ စည်ပင်သာယာဝပြော၍ ထင်ရှားကျော်ကြားလာ၏။ နောင်အခါ အကြောင်းမသင့်သောကြောင့် မှဲ့ရှင်မျက်လုံး ကွယ်ပျောက်သွားရလေသည်။ ယင်းကို အစွဲပြု၍ မွတ်ပိရာဇမင်းကို မွန်ဘာသာဖြင့် မွတ်မယ်လိန်းဟုခေါ်တွင်သည်။
မျက်စိတလုံးကွယ်သောမင်းဟူ၏။ မြို့၏အမည်ကိုလည်း ရမ္မာပူရ၊ ရမ္မာဝတီမှ မွတ်မယ်လိန်းဟူ၍ပင်ခေါ်ဆိုကြသည်။ မွတ်မယ်လိန်း ခေါ်တွင်ရာမှ ကာလရှည်လျားသောအခါ မော်လမိန်း၊ ထိုမှ မော်လမြိုင် အခေါ်သို့ ပြောင်းလဲလာခဲ့လေသည်။ ဤသည့်နောက်ပိုင်းတွင် မော်လမြိုင်မြို့သည် စစ်ပွဲအမျိုးမျိုးတို့၏ဒဏ်ကြောင့် အကြိမ်ကြိမ် ပျက်စီးခဲ့သည်ဖြစ်ရာ လက်အောက်ခံမြို့ကလေးအဖြစ်သို့ ရောက်ခဲ့သည်သာ များသည်။
ရှေးမွန်တွေက မုဟ်ၜဳလီု လို့ခေါ်တယ်(မုဘီလိန်း)ပါ အဓိပ္ပာယ်က မြစ်ဝအစွန်းတွေပျက်စီးနေတဲ့နေရာပါ မြစ်ဝပျက်စီးနေတာသိချင်ရင် မုတ္တမတောင်ပေါ်ကို ကား ဆိုင်ကယ်နဲ့တက်ပြီး ကြည့်ပါက မြစ်ဝဟာ ကျယ်ပြန့်ပြီး ကျွန်းတွေကွက်ကြားဖြစ်နေတာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးမွန်တွေဟာ လှေနဲ့ခရီးသွားရင်း ပန်းလောင်မြစ်ကို ပါင်လီု(မြစ်၀ပျက်နေသောမြစ်)ဟုလည်းခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ 
အေဒီ ၈ မှ ၁၈ ရာစု[ပြင်ဆင်ရန်]
မွန်တို့၏ မဂဒူးမင်းဆက် ခေါ် (ဝါရီရူးမင်းဆက်)တွင် (၁၅) ဆက်မြောက်မင်းဖြစ်သော ဘုရင်မကြီး ရှင်စောပု ပြီးနောက် နန်းတက်သည့် ဟံသာဝတီ မွန်နိုင်ငံဘုရင် ဓမ္မစေတီမင်းကြီး သာသနာသက္ကရာဇ် ၂၀၂၃၊ ကောဇာသက္ကရာဇ် ၈၄၀၊ ခရစ်နှစ် ၁၄၇၉ ခုနှစ်တွင် ရေးထိုးခဲ့သော ကလျာဏီကျောက်စာ အရ မော်လမြိုင်မြို့သည် မုတ္တမတိုင်းဒေသအတွင်း မွန်သုံးဆယ်နှစ်မြို့၌ ပါခဲ့လေသည်။
ကုန်းဘောင်မင်းဆက် ထူထောင်သော အလောင်းမင်းတရား သည် ယိုးဒယား(ထိုင်း) သို့ ချီတက်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက် ပြန်လည်ဆုတ်ခွာစဉ် မကျန်းမမာ ဖြစ်ကာ မော်လမြိုင်အနီး မုတ္တမကျေးကင်းရွာ၌ ခရစ်နှစ် ၁၇၆၀ မေ ၁၁ တွင် နတ်ပြည်စံတော်မူသဖြင့် ရွှေဘိုနေပြည်တော်သို့ တော်ဝင်တပ်တော်များ ပြန်လာခဲ့ကြသည်။ ထိုစဉ် စစ်သူကြီး ဗိုလ်ချုပ် မင်းခေါင်နော်ရထာ ခေါ် (မုဆိုးချုံ ဗိုလ်တွန်)သည် ရသမျှသော သုံ့ပန်းလူစုများနှင့် မော်လမြိုင်ကို ပြုပြင်ခဲ့လေသည်။ အလောင်းမင်းတရား၏ အရိုက်အရာကို ဆက်ခံသော နောင်တော်ကြီးမင်းက မင်းခေါင်နော်ရထာကိုပင် မြို့ပြတည်ထောင်ခြားနား၍ ပုန်ကန်သည် အထင်မှားခြင်းကို ခံခဲ့ရဖူးလေသည်။ တစ်ဖန် ပထမ အင်္ဂလိပ်- မြန်မာစစ်ပွဲတွင် စကြာဝန်ကြီးအား မော်လမြိုင်မြို့ကို ပြုပြင်ခိုင်းပြန်သည်။ တိုင်းပြည်မအေးချမ်းသဖြင့် ပြန်လည်ပျက်စီး ယိုယွင်းခဲ့ရပြန်သည်။
ကိုလိုနီခေတ် မော်လမြိုင်မြို့ (၁၈၂၄ မှ ၁၉၄၈)[ပြင်ဆင်ရန်]
မော်လမြိုင် စစ်ကဲ တရားသူကြီး မောင်ထော်လေး (ခရစ်နှစ် ၁၇၇၄ - ၁၈၆၇)
ခရစ်နှစ် ၁၈၂၄-ခုနှစ်တွင် စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပထမ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာစစ်ပွဲ အပြီး ခရစ် ၁၈၂၆ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှလက်အောင်သို့ ရန္တပိုစာချုပ်အရ အောက်မြန်မာနိုင်ငံကို ပေးလိုက်ရသောအခါ မော်လမြိုင်မြို့သည် အောက်မြန်မာပြည်၏ ပထမဆုံး မြို့တော် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုစဉ် ကုန်းဘောင်မင်းဆက် (၁၁) ဆက်တွင် သတ္တမမြောက် ဖြစ်သော မြန်မာဘုရင် ဘကြီးတော်ဘုရား၏ အထင်မှားခြင်းကို ခံရသောအတွက်ကြောင့် မွန်လူမျိုး ဒလမြို့စား (ကျော်ထင်သီဟသူဘွဲ့ခံ) စစ်ကဲကြီး မောင်​ထော်​လေး သည် အန္တရာယ်ရှောင်တိမ်းသည့်သဘောဖြင့် လှေကြီး လှေငယ်ပေါင်း ၂ဝ⁠ဝ ကျော်တွင် မွန်လူကြီး လူငယ်ပေါင်း တသောင်းကျော် ၂ သောင်းခန့်ကို တင်၍ ရေကြောင်းကူးလာရာ မော်လမြိုင်မြို့ဟောင်းသို့ ဆိုက်ရောက်လျှင် တအိမ်မျှမရှိ၊ တောခုတ်ရှင်းလင်း၍ အိမ်ရာအသီးသီး ဆောက်လုပ်နေထိုင်ကြသည်။ ထိုမှ တစတစ လူမျိုးခြားတို့နှင့် ဆက်ဆံလာခဲ့ရာမှ စည်ကားခဲ့လေသည်။
ခရစ်နှစ် ၁၈၃၆ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးသတင်းစာ ဖြစ်သော "မော်လမြိုင်ခရော်နီကယ် သတင်းစာ(The Maulmain Chronicle)"ကို ဗြိတိသျှတို့သည် မော်လမြိုင်၌ စတင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၎င်းမော်လမြိုင်ခရော်နီကယ် သတင်းစာသည် အင်ဒိုချိုင်းနားဒေသ (အရှေ့တောင်အာရှ ကျွန်းဆွယ်ဒေသ)၏ ပထမဆုံးသတင်းစာလည်း ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နှစ်ခြင်းကို စတင်တည်ထောင်သူ အဒိုနီရမ်ဂျပ်ဆင်(ယုဒသန်)သည် သူပြန်ဆိုသော မြန်မာ့ပထမဆုံးဓမ္မသစ်ကျမ်းကို ၁၈၃၂ ခုနှစ်တွင် မော်လမြိုင်၌ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ရိုက်နှိပ်ခဲ့သည်။ ၁၈၃၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်တွင် ဂျာမန်စူးစမ်းရှာဖွေသူ Johann Wilhelm Helfer မော်လမြိုင်ဆိပ်ကမ်းသို့ ဆိုက်ရောက်ခြင်းဖြင့် သူ့ကိုသမိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိသော ပထမဆုံးဂျာမန်လူမျိုး ဖြစ်လာစေခဲ့သည်။ ၁၈၅၂ ခုနှစ်တွင် ယုဒသန်၏ လက်ငုတ်ဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံး အင်္ဂလိပ်- မြန်မာအဘိဓာန်ကို ဆရာအီး၊ အေး၊ စတီဗင်က မော်လမြိုင်မြို့ အမေရိကန် သာသနာပုံနှိပ်တိုက်၌ ပထမအကြိမ် စက်တင်ပုံနှိပ် နိုင်ခဲ့လေသည်။
ခရစ်နှစ် ၁၈၇ဝ ခုနှစ်ကာလ မော်လမြိုင်မြို့
ခရစ်နှစ် ၁၈၂၆ မှ ၁၈၆၂ အကြားတွင်, ကိုလိုနီခေတ်မော်လမြိုင်မြို့သည် ဗြိတိသျှမြန်မာနိုင်ငံ၏ဗဟို ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် ပြီးနောက် ၁၈၆၂ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော်ကို မော်လမြိုင်မှ ရန်ကုန်သို့ တရားဝင်ပြောင်းရွေ့ခဲ့သည်။ ၁၈၇၃ ခုနှစ်တွင် ကုန်းဘောင်မင်းဆက် (၁၁) ဆက်တွင် ဒဿမ​မြောက် ဖြစ်သော မြန်မာဘုရင် မင်းတုန်းမင်း စေလွှတ်သောသံအဖွဲ့ကို ကင်းဝန်မင်းကြီးဦးကောင်း ဦးဆောင်၍ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပါရီမြို့တော်သို့အသွား၌ ဗြိတိသျှပိုင်မော်လမြိုင်မြို့သို့ ခေတ္တရောက်လာရာတွင် မြို့၏ရှုမျှော်ခင်းကို ခရီးစဉ် ရကန်ဖွဲ့ဆိုခဲ့လေသည်။ ခရစ်နှစ် ၁၈၇၈ ပြည့်နှစ်တွင် မင်းတုန်းမင်း နတ်ရွာစံပြီးနောက် "သီရိပုဗ္ဗာရတနာဒေဝီ"ဘွဲ့ခံ စိန်တုံးမိဖုရား သည် သီပေါမင်းပိုင် အထက်မြန်မာပြည်မှ ဗြိတိသျှပိုင် အောက်ပြည်ကို စုန်ဆင်းကာ မော်လမြိုင်မြို့ သာယာကုန်းရပ်ရှိ အိမ်တစ်လုံးတွင် နေထိုင်ခဲ့သည်။ စာပေ နိုဘဲလ်ဆုရ အင်္ဂလိပ် ဂန္ထဝင် ကဗျာဆရာ ရတ်ဒ်ယတ် ကစ်ပလင် သည် ၁၈၉ဝ ခုနှစ်တွင် မော်လမြိုင်မြို့သို့ ခေတ္တရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၁၈၉၂ ခုနှစ်တွင်သူ၏ မန္တလေးအမည်ရှိ ကဗျာအဖွင့် ၌ ဤသို့ ရေးသားထားသည်။
ထို့အပြင် ကမ္ဘာ့စာပေလောကတွင် လျှမ်း⁠လျှမ်းတောက်ကျော်ကြားခဲ့သော အင်္ဂလိပ် စာရေးဆရာ ဂျော့အိုဝယ်(George Orwell)၏ ဘိုးဘွားမိဘများ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် အခြေချနေထိုင်ခဲ့ရာမြို့ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဂျော့အိုဝယ် ကိုယ်တိုင်လဲ ၁၉၂၆ ခုနှစ်တွင် နေထိုင်ခဲ့သည့်မြို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၆ ခုနှစ်တွင်သူ၏ စာအုပ် Shooting an Elephant ၌ ဤသို့ရေးသားထားလေသည်။
"In Moulmein, in Lower Burma, I was hated by large numbers of people -- the only time in my life that I have been important enough for this to happen to me".
ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ်တွင် ဂျာမနီ၊ စီယမ်၊ ပါးရှား၊ ဒိန်းမတ်၊ နော်ဝေးနှင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံတို့သည် မော်လမြိုင်၌ ကောင်စစ်ဝန်ရုံးများကို ဖွင့်လှစ်ထားရှိခဲ့ပြီး အီတလီနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့သည် မော်လမြိုင်၌ ကောင်စစ်ဝန်အေဂျင်စီများ ထားရှိခဲ့သည်။ ကိုလိုနီခေတ်တွင် မော်လမြိုင်မြို့၌ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ လူမျိုးစပ်များဖြင့် ပြည့်နှက်နေပြီး ထို အင်္ဂလိပ်နွယ်ဖွား မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်း အများအပြား ရှိနေမှုကြောင့် အင်္ဂလန်အသေးစားလေး (Little-England) ဟုပင်ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ ထိုသူတို့သည် ရော်ဘာစိုက်ပျိုးရေးအတွက် မအားရအောင်ပင် ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ယနေ့ခေတ်တွင်မူ ထိုသူတို့သည် မရှိသလောက်ပင် ရှားပါးသွားပြီဖြစ်သည်။
သံလွင်မြစ်ဝပေါ်တွင် တည်ရှိနေသော မော်လမြိုင်မြို့( ၁၉၀⁠၀ခုနှစ် အစောပိုင်းကာလ)
မော်လမြိုင်မြို့သည် (မြူနီစီပယ်နယ်နမိတ်နှင့် ရေဝန်ဆိပ်ကမ်းအပါအဝင်) ၂၁ စတုရန်းမိုင် ကျယ်ဝန်း၏။ မြူနီစီပယ်အဖွဲ့ကို ခရစ် ၁၈၇၄ ခုနှစ်ကစ၍ တည်ထောင်ကာ မြို့၏ စည်ပင်သာယာမှုကို စီမံအုပ်ချုပ်သည်။ မြို့၏ အရှေ့တောင်တန်းတလျှောက်တွင် ကျိုက်သလ္လံစေတီတော်၊ မဟာမြတ်မုနိဘုရား၊ ဇိနမာရ်အောင်စေတီတော်တို့ရှိကြသည်။ မြို့လယ်တွင်ကား ကျိုက်သုတ်စေတီရှိသည်။ ယင်းတောင်တန်းတလျှောက်နှင့် မြို့တွင်းမြို့ပတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း အများအပြား ရှိသည့်အပြင် ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်ကြီးများလည်း ရှိသည်။ မော်လမြိုင်မြို့ တောင်ဘက် ၄ မိုင်အကွာရှိ တောင်ဝိုင်းတောင်နှင့် ရွှေနတ်တောင်ကြားတွင် မြို့သို့ရေပေးသော ကင်မွန်းချုံ ရေလှောင်ကန်ကြီးကို မြူနီစီပယ်အဖွဲ့မှ ငွေပေါင်း ၉ သိန်း ခွဲ အကုန်ခံ၍ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ခရစ်နှစ် ၁၉၁ဝ ပြည့်နှစ်တွင် ပြီးစီးခဲ့လေသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ မြို့သို့ ရေကောင်းရေသန့်များ ပေးသွင်းနိုင်ခဲ့သောကြောင့် နှစ်စဉ်နွေဥတုတွင် ဖြစ်တတ်သော ဝမ်းရောဂါဘေးမှ ကင်းလွတ်ကြရလေသည်။ 
ဗြိတိသျှအစိုးရပိုင်အထက်တန်းကျောင်း ၂ကျောင်းရှိသည့်ပြင် ရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသ အမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီး အထက်တန်းကျောင်းနှင့် နိုင်ငံခြားသာသနာပြု အထက်တန်းကျောင်းများ အတော်များ⁠များရှိသည်။ မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်းကျောင်းများလည်းရှိ၏။ တိုင်းမင်းကြီးရုံး၊ ခရိုင်ဝန်ရုံး၊ မြူနီစီပယ်ရုံးကြီး၊ နာရီစင်၊ အကျဉ်းထောင်၊ အမေရိကန်သာသနာပြုဆေးရုံ(Ellen Mitchell Hospital)၊ ဗြိတိသျှအစိုးရပိုင်ဆေးရုံကြီး၊ ဗဟိုစာတိုက်ကြီးနှင့် စာတိုက်ငယ်များ၊ မော်တင်လိန်းဆရာဖြစ် သင်တန်းကျောင်း၊ မျက်မမြင်ကျောင်း၊ Wellesley Bailey တည်ထောင်သော အခမဲ့ကုဋ္ဌနူနာဆေးရုံ တို့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် မတိုင်မီက မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ဇနီး ဒေါ်ခင်ကြည်သည် စကော့လူမျိုး (စကော့တလန်လူမျိုး) အမျိုးသမီးများအုပ်ချုပ်သော မော်တင်လိန်းဆရာဖြစ် သင်တန်းကျောင်း(ABM ကျောင်း)၌ ပညာသင်ခဲ့သည်။
လက်ရှိ မော်လမြိုင်မြို့ (၁၉၄၈ မှ ယခု)[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၉၄၈ ခုနှစ် အင်္ဂလိပ်တို့ထံမှ လွတ်လပ်ရေး ရရှိခဲ့ပြီးနောက် မော်လမြိုင်မြို့သည် မြန်မာ့အရှေ့တောင်၏ ယဉ်ကျေးမှု၊ ပညာရေး နှင့် စီးပွားရေး ဗဟိုချက်အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့သည်။ ၁၉၅၀ပြည့်နှစ်တွင် ကရင်သောင်းကျန်းသူတို့ သိမ်းပိုက်ထားသော မော်လမြိုင်မြို့ကို တပ်မတော် (ရေ) တပ်သားများနှင့် စစ်ရေယာဉ် (မေယု)တို့မှ ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင် သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၅၃ ခုနှစ်မှစတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော မော်လမြိုင်ဥပစာကောလိပ်ကို ၁၉၆၃ ခုနှစ်မှ အစပြု၍ ဒီဂရီကောလိပ်အဖြစ် တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် ခန့်မှန်း သန်းကောင်စာရင်းအရ လူဦးရေ ၁⁠၁၅၉၃၁ ယောက်ရှိသည်။ မော်လမြိုင်မြို့သည် အပူပိုင်းဒေသအတွင်း ကျရောက်သော်လည်း ပင်လယ်ကမ်းခြေနှင့် နီးခြင်း၊ တောင်အခံရှိခြင်း၊ မြစ်လေးမြွာတို့၏ဆုံရာ၌ တည်ထားခြင်းတို့ကြောင့် ရာသီဥတုမျှတ၍ မြေဩဇာကောင်းမွန်သည်။ နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှ မိုးရေချိန် ၁၈၈ လက်မရှိ၍ ပျမ်းမျှအပူချိန်မှာ ဒီဂရီ ၈ဝ ခန့်ရှိသည်။ မော်လမြိုင်မြို့သည် မြို့တော်အသစ် နေပြည်တော်မြို့ မတည်ထောင်ချိန်ထိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တတိယအကြီးဆုံးမြို့ ဖြစ်ခဲ့သည်။
မြို့ပြ အမွေအနှစ် စောင့်ရှောက်ရေး[ပြင်ဆင်ရန်]
မော်လမြိုင်ရှိ ကိုလိုနီ ခေတ် ဗိသုကာ လက်ရာ အဆောက်အဦးဟောင်း တစ်ခု (ခရစ်နှစ် ၂၀၀၈ခုနှစ်)
မော်လမြိုင်ရှိ ရှေးဘာသာရေး အမွေအနှစ်အဆောက်အဦးများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သင့်သည်မှာ အမှန် ဖြစ်သလို ပျက်စီး လုနီးဖြစ်နေသော ကိုလိုနီခေတ် ဗိသုကာလက်ရာ အမွေအနှစ်များကလည်း ထူးခြားသည့် အတွက် ထိန်းသိမ်း သင့်သည်ဟု ပညာရှင်များမှ ဆိုသည်။ သို့သော်လည်း ပြည်နယ် အစိုးရနှင့် ပြည်သူများက အဆောက်အဦးဟောင်းများကို တန်ဖိုး ရှိသည် ဟု မမြင်ကြဟု ပညာရှင်များကဆိုသည်။ ရန်ကုန်မြို့ပြ အမွေအနှစ် စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့က ဦးဆောင်၍ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကိုလိုနီ ခေတ် ဗိသုကာ လက်ရာ အဆောက်အဦးဟောင်းများကို ဖြိုဖျက်ခံရမည့် အန္တရာယ်နှင့် ပျက်စီးပျောက်ကွယ်တော့မည့် အန္တရာယ်များမှ ကယ်ဆယ်ရန် ကြိုးစားမှုများ အောင်မြင်နေခြင်းကြောင့် မော်လမြိုင်မြို့အတွက်လည်း မျှော်လင့်ချက် ခပ်ရေးရေးတော့ ရှိနေပါသေးသည်။
မော်လမြိုင်မြို့သည် သံလွင်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တွင် တည်ရှိသော ဒေသတစ်ခု ဖြစ်သည်။ မြစ်ပါးစပ်တွင် ဘီလူးကျွန်းသည် သံလွင်မြစ်ကို ခွပိတ်ထားပြီး မုတ္တမပင်လယ်ကွေ့ အတွင်းသို့ စီးဝင်စေသည်။ ထိုကျွန်း၏အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် ထင်ရှားသော ခေါင်းဆေးကျွန်းရှိလေသည်။ ပင်လယ်မှ ၂၈ မိုင်ဝေး၏။ မြို့သည် အနောက်ဘက်နှင့် မြောက်ဘက်ရှိ သံလွင်မြစ်နှင့် အတ္ထရံမြစ် ကမ်းရိုးတလျှောက်နှင့် အရှေ့ဘက် တောင်တန်းအကြားတွင် တည်ထားသောမြို့ဖြစ်ရကား အလျားရှည်၍ အနံတို၏။ မြို့၏အလျားမှာ ၇ မိုင်ခန့်ရှိ၍ တ​တောင်ဆစ်ကွေး သဏ္ဌာန်ရှိ၏။ မြို့သည် အရှေ့မှ အနောက်သို့ ဆင်ခြေလျှော ရှိပြီးလျှင် အရှေ့ဘက်တောင်တန်းတလျှောက်ပေါ်၌ စေတီများ တည်ထားသည့်ပြင် ကမ်းရိုးတလျှောက်၌လည်း သစ်ပင်အမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် စိမ်းစိမ်းလန်းလန်း စို⁠စိုပြည်ပြည် ရှိရကား အလွန်သာယာသော ရှုမျှော်ခင်းကောင်း ဆိပ်ကမ်းမြို့တမြို့အဖြစ် ထင်ရှားကျော်ကြားသည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးသည်များသည် မော်လမြိုင်သို့ မီးသင်္ဘောဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မီးရထားဖြင့်ဖြစ်စေ လာရောက်ကြသည့်အခါ မြို့၏သာယာလှသည့် ရှုမျှော်ခင်းကို အဝေးကပင် မြင်ကြရသည်။
ထို့ကြောင့် ကင်းဝန်မင်းကြီးဦးကောင်း သည် သံအရာရှိကြီးအဖြစ်ဖြင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပါရီမြို့တော်သို့အသွား မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၃၅ ခုနှစ် တန်ခူးလ (ခရစ်နှစ် ၁၈၇၃ ခုနှစ်)၌ မော်လမြိုင်မြို့သို့ ခေတ္တရောက်လာရာတွင် မြို့၏ရှုမျှော်ခင်းကို ခရီးစဉ် ရကန်၌ ကို⁠ကိုနာဒ၊ သာစွမည်တွင်၊ စက်ယာဉ်ညင်နှင့်၊ ရေပင်လယ်ချက်၊ စခန်းသို့ထွက်ခဲ့၍၊ တရက်နှင့်တည၊ ကာလမကြာ၊ ရှုလေရာပင်၊ နတ်ရွာတပြိုင်၊ မော်လမြိုင်သို့၊ ရောက်တိုင်ဝင်ဆိုက၊ တွေ့ကြုံကြိုက်ရသည်၊ မျှော်လိုက်တိုင်း လွန်ပျိုနု၏။ဟူ၍ ဖွဲ့ဆိုခဲ့လေသည်။
မော်လမြိုင်မြို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့တောင်သို့ သွားရာတွင် အဓိက မုဒ်ဝ လမ်းမကြီးပင် ဖြစ်သည်။ သံလွင်တံတားကြီးသည် မော်လမြိုင်မြို့နှင့် မုတ္တမမြို့တို့ကို ဆက်သွယ်ပေးထားသော မီးရထား၊ ကားသွားနိုင်သော တံတားကြီး တစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မီးရထားလမ်းနှင့် ကားလမ်းပါဝင်သော တံတားများတွင် အရှည်ဆုံးတံတား တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုတံတားသည် ပေပေါင်း ၁၁, ၀⁠၀၀⁠ ကျော် ရှည်ပြီး နိုင်ငံ၏ အရှေ့တောင်ပိုင်းနှင့် ရန်ကုန်မြို့ကို ဆက်သွယ်ပေးထားသည်။ ထို့ပြင် မော်လမြိုင်မြို့သည် ကရင်ပြည်နယ်၏ မြို့တော် ဘားအံမြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏ မြို့များဖြစ်သော မြို့တော် ထားဝယ်မြို့၊ မြိတ်မြို့များနှင့်လည်း ဆက်သွယ်ပေးထားသေးသည်။ ရှေးယခင်က ထိုမြို့များသို့သွားရန်အတွက် မုတ္တမမြို့မှ ကူးတို့လှေ၊ သင်္ဘောများကို တဆင့်စီးရပြီး ယခုအခါ ထို သံလွင်တံတားကြီးမှ မီးရထား၊ ကားဖြင့် တိုက်ရိုက် သွားလာနိုင်ပေသည်။ သံလွင်တံတားကြီးကို ၂၀⁠၀၆ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့လေသည်။ မော်လမြိုင်တောင်ဘက် ရေးမြို့အထိ ဖောက်လုပ်ထားသော မီးရထားလမ်းမှာ မိုင် ၉ဝ ရှည်၏။ မော်လမြိုင်မှ ကျိုက္ခမီမြို့သို့ သွားသော မော်တော်ကားလမ်းမှာ ၅၅ မိုင်ရှည်လျားသည်။ မော်လမြိုင်မြို့ အရှေ့တောင်ရှိ ကျိုက်မရောမြို့သို့ သွားသော မော်တော်ကားလမ်းမှာ ၁၅ မိုင်ရှည်၏။ ဘီလူးကျွန်းကို မော်လမြိုင်မြို့နှင့် ဆက်သွယ်နိုင်သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတံတား (ဘီလူးကျွန်း) ကို ၂၀၁၇ မေ ၉ တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
သံလွင်မြစ်ကြီးမှာ သဲသောင်ထူထပ်သောကြောင့် ပင်လယ်ဝမှ ၂၈ မိုင်ခန့်အကွာရှိ မော်လမြိုင်မြို့အထိသာ ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးများ ဆန်တက်သွားလာနိုင်သည်။ သို့သော် မော်လမြိုင်မြို့မှ သံလွင်မြစ်ကြောင်း၌ ၇၄ မိုင်၊ အတ္ထရံမြစ်ကြောင်း၌ ၇၃ မိုင်နှင့် ဂျိုင်းမြစ်ကြောင်း၌ ၄၂ မိုင်အထိ ပြည်တွင်းရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ပိုင် မီးသင်္ဘောများဖြင့် သွားလာနိုင်သည်။ မော်လမြိုင်မှ ရန်ကုန်မြို့သို့ ပင်လယ်ကြောင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ပင်လယ်ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အဖွဲ့ပိုင်နှင့် နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီများပိုင် ပင်လယ် ကမ်းရိုးတန်းသွား သင်္ဘောများဖြင့် တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်ကျ မှန်မှန် သွားလာပို့ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ထိုကြောင့် မော်လမြိုင်မြို့သည် ပြည်တွင်းပြည်ပ ကုန်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး၌ များစွာ စည်ပင်သည်။
မော်လမြိုင်လေဆိပ်မှ ရန်ကုန်မြို့သို့ ပုံမှန် လေကြောင်းပျံသန်းမှုများလည်း ရှိသေးသည်။
၎င်းကို အေဒီ ၈၇၅ တွင် မွန်ဘုရင် မွတ်ပိရာဇာမင်း လက်ထက်တွင် စတင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းကို မူလအမြင့် ၅၆ ပေမှ ၁၇ မီတာမှအမြင့် ၁၅၀ (၄၆ မီတာ) အထိ မွန်ဘုရင် ဗညားဝါရူး (ခေါ်) ဝါရီရူးမင်း (မဂဒူးမင်း) အပါအဝင် ဆက်ခံသော မွန်ဘုရင်များက ပြုပြင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ မော်လမြိုင်၏ ဝိသေသလက္ခဏာ ပျောက်ကွယ်မသွားစေရန် ခရစ်နှစ် ၁၈၃၁ ခုနှစ်တွင် မော်လမြိုင် စစ်ကဲ တရားသူကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ စစ်ကဲ မောင်ထော်လေး သည် အများပြည်သူမှ ရရှိသောရန်ပုံငွေများဖြင့် ဘုရားကို ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့သည်။ စာပေ နိုဘဲလ်ဆုရ အင်္ဂလိပ် ဂန္ထဝင် ကဗျာဆရာ ရတ်ဒ်ယတ် ကစ်ပလင် (Rudyard Kipling) သည် ၁၈၉၀ ခုနှစ်တွင်ကျော်ကြားသော“ Lookin 'lazy at the sea” ကဗျာစာကြောင်းကို ဤစေတီ၌ ရေးသားခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။
ကျိုက်သံလန်စေတီရှိ ခရစ်နှစ် ၁၅၃၃ တွင် မွန်ဘုရင် သင်္ဂသူရမင်း လှူဒါန်းခဲ့သော ရှေးခေါင်းလောင်း
ရတ်ဒ်ယတ် ကစ်ပလင် - ခရစ်နှစ် ၁၈၉၂ ခုနှစ်
ဦးဇိနစေတီတော်သည် တောင်တန်းများပေါ်တွင် တည်ရှိသည့် အဓိကဘုရားများအနက်မှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဆံတော်များပါဝင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကာကွယ်ပေးသော ဘုရင်အသောကမင်း တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ခရစ်နှစ် ၁၈၃၈ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့သူ ရသေ့ကြီးဦးဇိနကို အစွဲပြုကာ အမည်ပေးခဲ့လေသည်။ ထိုမတိုင်မီက ဘုရားကို ကျိုက်ပဒန် (Kyaik Pa-dhan) ဘုရားဟု ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
ဦးဇိနစေတီတော် ခေါ် (ကျိုက်ပဒန်စေတီတော်)
သီပေါဘုရင်၏ စတုတ္ထမြောက်သမီးဖြစ်သော တော်ဝင်မင်းသမီးမြတ်ဖုရားက​လေး ၁၉၁၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာပြည်သို့ပြန်လာပြီး မော်လမြိုင်အနောက် Cantonment လမ်းရှိ သူမ၏စံအိမ်တော်ကြီးတွင် နေထိုင်ခဲ့သည်။ သူမသည် ခရစ်နှစ် ၁၉၃၆ မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် မော်လမြိုင်မြို့ရှိ သူမ၏စံအိမ်တော်၌ပင် ကံတော်ကုန်ခဲ့သည်။ ဤစတုတ္တသမီးတော်၏ ပြာသာဒ်ဂူသည် မော်လမြိုင် ကျိုက်သံလန်စေတီ အနီးတွင်တည်ရှိသည်။
ကုန်းဘောင်မင်းဆက်၏ နောက်ဆုံးစတုတ္တသမီးတော် (လက်ဝဲ အစွန်)
ထိုဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဖြစ်ပြီး ခရစ်နှစ် ၁၈၂၇ တွင် ရှေးဦး ပထမဆုံး မြန်မာ - အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်ကို ရေးခဲ့သော အမေရိကန်လူမျိုး ခရစ်ယာန် သာသနာပြု ပုဂ္ဂိုလ် အဒိုနီရမ် ဂျပ်ဆင် (ယုဒသန်) မှတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် လှုပ်ရှားမှုအတွက် အရေးပါသော သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ရှင်မဿဲ အင်္ဂလိကန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
၎င်းသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးတည်ဆောက်ခဲ့သော အင်္ဂလိပ်အင်္ဂလီကန်ချာ့ချ် (Church of England) ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအစပိုင်းတွင် ခရစ်နှစ် ၁၈၃၂ ခုနှစ်တွင်စိုက်ထူခဲ့ပြီး ၁၈၈၇ ခုနှစ်တွင် လက်ရှိလှပတင့်တယ်သော ဝိတိုရိယခေတ်ပုံစံ အဆောက်အအုံကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ကျော်ကြားသော ဗြိတိန်ဗိသုကာပညာရှင်များဖြစ်သော လန်ဒန်မြို့မှ St Aubyn & Wadling ၏ ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး အုတ်မြစ်ကျောက်ကို မြန်မာကော်မရှင်နာချုပ် ဆာချားလ်စ်ခရော့စ်ဝိုက်က တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် အုတ်နီများဖြစ်ပြီး အတွင်းပိုင်းတိုင်များ ကျောက်တုံးများဖြစ်သည်။ Dresden ရှိအင်္ဂလိပ်ဘုရားကျောင်း၏ စံနမူနာဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့စာပေလောကတွင် လျှမ်း⁠လျှမ်းတောက်ကျော်ကြားခဲ့သော အင်္ဂလိပ် စာရေးဆရာ ဂျော့ခ်ျအော်ဝဲလ်သည် ၁၉၂၆ ခုနှစ်တွင် မော်လမြိုင်ရှိ Imperial Policeman အဖြစ် ဤဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဤဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင် သူ့ဆွေမျိုးများ၏ ကမ္ပည်းများရှိသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ဂျပန်တို့သိမ်းပိုက်ရာတွင် ဂျပန်စစ်တပ်သည် ဤဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင် ဆားသိုလှောင်ထားခဲ့သည်။ ဘုရားကျောင်းသည် အသုံးပြုဆဲဖြစ်သော်လည်း ပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီး ထိန်းသိမ်းရန် အရေးတကြီးလိုအပ်နေသည်။
ခရစ်နှစ် ၁၈၂၆ ခုနှစ်တွင် သံလွင်ပန်းခြံရှိ တောင်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ လှပတင့်တယ်သည့် ဤကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အအုံတွင် ဂျော့ခ်ျအော်ဝဲလ်သည် ၁၉၂၆ ခုနှစ်တွင် လက်ထောက်ခရိုင် ပုလိပ်မင်းကြီး (Assistant District Superintendent) အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
မော်လမြိုင်ကိုလိုနီခေတ်ထောင်ကို ခရစ်နှစ် ၁၈၃၀ ပြည့်နှစ်များတွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကာနတကပြည်နယ်၏ မြို့တော် ဘန်ဂလိုမြို့ (ယနေ့ အိန္ဒိယဆီလီကွန်တောင်ကြား) ၏ လှပသော အခြေခံအဆောက်အအုံများစွာကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲမှုအတွက် ဂုဏ်ပြုခံရသည့် နာမည်ကျော် အိုင်ယာလန်လူမျိုး စစ်အင်ဂျင်နီယာ ဆာရစ်ချတ်ဟီရမ်ဆန်ကီသည် ခရစ်နှစ် ၁၈၆၀တွင် ထောင်တွင်းကြီးကြပ်သူအဖြစ် ဤထောင်တွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့စာပေလောကတွင် လျှမ်း⁠လျှမ်းတောက်ကျော်ကြားခဲ့သော အင်္ဂလိပ် စာရေးဆရာ ဂျော့ခ်ျအော်ဝဲလ်၏ ၁၉၃၁ ခုနှစ်ထုတ် ဇာတ်လမ်းတို "A Hanging (1931)"သည် ဤထောင်ထဲမှ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အခြေခံထားသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင် စင်ကာပူကျဆုံးပြီးနောက် စင်ကာပူနိုင်ငံ ချန်ဂီအကျဉ်းထောင်မှ ပြောင်းရွှေ့လာသော စစ်သုံ့ပန်း မဟာမိတ်စစ်သားများကို သေမင်းတမန် ရထားလမ်း ဆောက်လုပ်ရေးသို့ မပို့မီ မော်လမြိုင်အကျဉ်းထောင်တွင် ဂျပန်စစ်တပ်မှ ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။
စိန့်ပက်ထရစ် ရိုမန်ကက်သလစ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
စိန့်ပက်ထရစ် ချာ့ချ်၏ ခရစ်နှစ် ၁၈၅၄ တွင် ဆောက်လုပ်ခဲ့သော နာရီမျှော်စင်
စိန့်ပက်ထရစ် ရိုမန်ကက်သလစ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို ခရစ်နှစ် ၁၈၂၉ တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ပြင်သစ်လူမျိုးတို့က ခရစ်နှစ် ၁၈၅၄ တွင် ဤချာ့ချ်၏ နာရီမျှော်စင်ကို ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ချာ့ချ်ဝင်းရှိ စိန့်ပက်ထရစ်ကျောင်းသည် ကိုလိုနီခေတ်တွင် အထက်တန်းလွှာကလေးများအတွက် ကျော်ကြားသော ဘော်ဒါကျောင်းဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ချင်းမိုင် တော်ဝင်မင်းသား Sukkasem နှင့် မွန်မိန်းကလေးတို့၏ ဝမ်းနည်းဖွယ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဇာတ်လမ်းသည် ခရစ်နှစ် ၁၈၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် ဤကျောင်း၌ဖြစ်ခဲ့သည်။
စိန်တုံးမိဖုရားကျောင်း ခေါ် (ရတနာဘုံမြင့်ကျောင်း) သည် ကောင်းမွန်သော လက်မှုလက်ရာကြောင့် ကျော်ကြားသည်။ စုဖုရားလတ်၏ မယ်တော် ဆင်ဖြူမရှင်၏ အန္တရာယ်ကို ရှောင်တိမ်းသည့်သဘောဖြင့် သီပေါမင်းပိုင် အထက်ပြည် မန္တလေးရတနာပုံမှ စုန်ဆင်းကာ ဗြိတိသျှပိုင် အောက်ပြည်ရှိ မော်လမြိုင်မြို့တွင် နေထိုင်ခဲ့သည့် စိန်တုံးမိဖုရား၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် မန္တလေးမှ ဗိသုကာပညာရှင်တို့ကို ခေါ်ယူကာ ခရစ်နှစ် ၁၈၈၆ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ တည်ဆောက်မှု ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို မော်လမြိုင်မြို့ခံ သူဌေးမ ဒေါ်ရွှေပွင့်က လှူဒါန်းခဲ့သည်။ စိန်တုံးမိဖုရားသည် မင်းတုန်းမင်း၏ မိဖုရား ၆၄ ပါးတွင် "သီရိပုဗ္ဗာရတနာဒေဝီ"ဘွဲခံ မိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်သည်။
ဝိတိုရိယခေတ်ပုံစံ နာရီမျှော်စင်ကို ဝိတိုရိယပန်းခြံ (Victoria Park) ခေါ် (ယခု မောရဝတီပန်းခြံ) အနီး အရှေ့ဘက်တွင် မော်လမြိုင်သားများက ဗြိတိသျှအင်ပါယာထီးနန်း၏ ဝိတိုရိယဘုရင်မကြီးပြီးနောက် နန်းတက်သည့် သတ္တမမြောက် အက်ဒဝပ်ဘုရင် အမှတ်တရအဖြစ် ခရစ်နှစ် ၁၉၁၂ ခုနှစ်တွင် စိုက်ထူခဲ့သည်။
မော်လမြိုင်မြို့သည် မန္တလေး စကား၊ ရန်ကုန် အကြွား၊ မော်လမြိုင် အစား ဟူသော မြန်မာ စကားပုံတစ်ခု အဖြစ်ကျန်ရစ်အောင်ပင် စားသောက်စရာ သီးနှံများဖြင့် ကျော်ကြားမှု ရှိလှသည်။ မော်လမြိုင်မြို့တွင် သစ်စက်အချို့နှင့် စပါးကြိတ်စက် လုပ်ငန်းများ၊ ကျွန်းသစ်နှင့် စပါးများအား သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများအား လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ထို့ပြင် ယခင်က ထင်ရှားသော သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပြီး နှင့် ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိက သင်္ဘောဆိပ်တစ်ခု အဖြစ်လည်း ကျန်ရှိနေသေးသည်။ ၂၀⁠၀၉ ခုနှစ် မေလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် မော်လမြိုင်မြို့၌ ဗုံးသုံးလုံး ပေါက်ကွဲခဲ့သော်လည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှုများကိုမူ အာဏာပိုင်များက ဖော်ပြခြင်း မရှိခဲ့ချေ။
ကျောထောက်နောက်ခံ နယ်များတွင် ကျွန်းသစ်၊ ဆန်စပါးနှင့် ကော်ဖတ် အမြောက်အမြား ထွက်သဖြင့် မြို့၏ ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်၌ သစ်စက်နှင့် ဆန်စက် အများအပြားရှိသည်။ ထိုကျွန်းသစ်၊ ဆန်စပါးနှင့် ကော်ဖတ်များကို နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များသို့ တိုက်ရိုက်တင်ပို့ရောင်းချသည်။ ဒူးရင်းသီး၊ မင်းကွတ်သီး၊ နာနတ်သီး၊ ကြက်မောက်သီး၊ သရက်သီးတို့လည်း အမြောက်အမြား ထွက်ရာ ရန်ကုန်မြို့နှင့် အခြားမြို့များသို့ တင်ပို့ရောင်းချရသည်။
မော်လမြိုင်မြို့၏ အစည်ကားဆုံးနေရာသည် ဒေါင်းမင်းရပ် ဖြစ်သည်။ အောက်လမ်းမကြီးရှိ အမှတ် (၁) ဈေးကြီးနှင့် အထက်လမ်းမကြီးရှိ အမှတ်(၂) ဈေးကြီးကို ဒေါင်းမင်းရပ်ဈေးက ဆက်သွယ်ပေးထားသည်။ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကြသူများဖြင့် အထူးစည်ကားလှသည်။ ကုန်စည်ဒိုင်နှင့် အဝေးပြေးကားဂိတ်၊ မီးရထား ဘူတာရုံ၊ သင်္ဘောဆိပ်တည်ရှိခြင်းကြောင့် ဒေသခံပြည်သူများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း အပြည့်အဝ ရရှိနေကြပြီဖြစ်သည်။
မော်လမြိုင်စက်မှုဇုန်အတွင်း စက်မှုလုပ်ငန်းများအဖြစ် အကြီးစား ၄၃ ခု၊ အလတ်စား ၁၃၀ ခု၊ အငယ်စား ၁၅ ခု စုစုပေါင်း ၁၈၈ ခု အား နိုင်ငံတော် အစိုးရထံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇွန်လကုန်အထိ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု တန်ဖိုး ကျပ် ၁၉⁠၉၈.၉၆ သန်း ရှိပြီး ထုတ်လုပ်မှု တန်ဖိုး ကျပ် သန်း ၉၆၅၈.၉၆ သန်း ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ရော်ဘာပြား ကြိတ်စက်လုပ်ငန်း၊ သံရည်ကျိုလုပ်ငန်း၊ သံအမာတင်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ ဓာတ်မြေဩဇာ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်း၊ ရေလုပ်ငန်းသုံး ဘော့သီးလုပ်ငန်း၊ မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း စသည်တို့ကို အဓိက လုပ်ကိုင်လျက် ရှိကြသည်။ ရော်ဘာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိက လုပ်ကိုင်သော မြို့ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ရော်ဘာစိုက်ပျိုးမှု အခြေခံလျက် ရော်ဘာလုပ်ငန်းသုံး စက်ကိရိယာများအပြင် လယ်ယာလုပ်ငန်းသုံး စက်ကိရိယာများကို လည်းကောင်း၊ စပါးခွံလောင်စာဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်ယူနိုင်သော စပါးခွံဓာတ်ငွေ့သုံး အသေးစား ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများကို လည်းကောင်း၊ အခြားစက်မှု အထွေထွေသုံး စက်ကိရိယာများကိုလည်းကောင်း ဒေသအခြေအနေနှင့် လိုက်ဖက်ညီမည့် နည်းပညာတို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ဖလှယ်ကာ ထုတ်လုပ်ပေးနေလေသည်။ 
မော်လမြိုင်မြို့သည် တနင်္သာရီတိုင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရန်အတွက် အဓိက ဒေသတစ်ခု ဖြစ်သည့်အပြင် သင်္ဘောဆိပ်နှင့် ပို့ဆောင်ရေး ဗဟိုချက်မ တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ထိုဒေသသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ မွန်လူမျိုးများ အဓိကနေထိုင်ရာ ဒေသ ဖြစ်သော်လည်း အမျိုးမျိုးသော ယဉ်ကျေးမှုများကို တွေ့မြင်ရသည်။ မော်လမြိုင်သည် အလွန်ရှေးကျသော ဗုဒ္ဓဘာသာ နေရာဌာန တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ၁၉ ရာစုနောက်ပိုင်းတွင် ဗြိတိသျှ နှင့် အမေရိကန် ခရစ်ယာန်သာသနာပြုများရောက်ရှိလာပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာလည်း စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ ၁၈၆၀ ခုနှစ်တွင် ဒီလ ရှယ်လီ ဘရားသားစ်က ခရစ်ယာန် သာသနာပြုကျောင်းများကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုနောက် စိန့်ပက်ထရစ် (ယခု မော်လမြိုင် အမှတ်(၅) အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း တစ်ခုဖြစ်သော)ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို ဖွင်လှစ်ခဲ့သည်။ ၂၀ ရာစု အစောပိုင်း ကာလများတွင် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ချဲ့ထွင်မှုများဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဟိန္ဒူလူမျိုးများ ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြသည်။
မော်လမြိုင်မြို့၏ သင်္ကြန်ရေသဘင်ပွဲတော်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျော်ကြားသည်။ ပွဲတော်ရက်များတွင် အနယ်နယ်မှ လာရောက်၍ ရေသဘင်ဆင်နွဲကြသည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း သီတင်းကျွတ်လတွင် ကျင်းပလေ့ရှိသော သံဃာ ၁ဝ⁠ဝဝ ကျော်ပါဝင်သည့် မောင်ငံဆွမ်းတော်ကြီးလောင်းပွဲသည် မော်လမြိုင်မြို့တွင် အလွန်စည်ကား၍ ထင်ရှားသော ပွဲတော်ကြီးဖြစ်သည်။ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၈၄၄ (မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂ဝ၄) ခုနှစ်မှ စ၍ မောင်ငံရပ်ကို အုပ်ချုပ်သော မင်းမောင်ငံက ဦးစီးပြုလုပ်ခဲ့ရာ ယနေ့တိုင် မပျက်မကွက် တည်တံ့လျက်ရှိသည်။ (မောင်ငံသည် မွန်လူမျိုးစစ်ကဲကြီး မောင်​ထော်​လေး၏ တပည့် ကင်းဝန် ဖြစ်သည်)။
မန္တလေး စကား၊ ရန်ကုန် အကြွား၊ မော်လမြိုင် အစား ဟူသော မြန်မာ စကားပုံတစ်ခု အဖြစ်ကျန်ရစ်အောင်ပင် မော်လမြိုင်သူ မော်လမြိုင်သားသည် အစားအစာကို အရသာရှိရှိ စီမံချက်ပြုတ်စားတတ်သည်။ မော်လမြိုင်ရွှေရင်အေး၊ မွန်ရိုးရာ မော်လမြိုင်သင်္ကြန်ထမင်း၊ မော်လမြိုင်မုန့်ဟင်းခါး ခေါ် (မုန့်ဟင်းခါးအစို) အစရှိသည်တို့ သည်ကျော်ကြားသည်။
မော်လမြိုင်မြို့တွင် အစိုးရအထက်တန်းကျောင်းပေါင်း ၁၃ ကျောင်း ရှိသည်။ ၁၈၆၀ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်သော စိန့်ပက်ထရစ်ကျောင်း (ယခု အမှတ်(၅) အထက်တန်းကျောင်း)၊ ၁၈၉၉ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်သော ရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသအမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်း (ယခု အမှတ်(၉) အထက်တန်းကျောင်း) များမှာ ထင်ရှားသည်။
သူနာပြုနှင့် သားဖွားသင်တန်းကျောင်း (မော်လမြိုင်)
မော်လမြိုင်မြို့တွင် မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်၊ မော်လမြိုင်ပညာရေးကောလိပ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မော်လမြိုင်)၊ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မော်လမြိုင်)၊ သူနာပြုနှင့် သားဖွားသင်တန်းကျောင်း (မော်လမြိုင်)၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာ သိပ္ပံ(မော်လမြိုင်) စသည်တို့ ရှိသည်။ ၁၈၆၄ ခုနှစ်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဗက်ခနဲ တက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သော နိုင်ငံခြား ပညာသင် ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်သူ မောင်ရှောလူးသည် မော်လမြိုင်မြို့တွင် မွေးဖွားသော မွန်လူမျိုး၊ မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများထဲမှ အနောက်တိုင်း ဆေးပညာကို အစပြုခဲ့သူဖြစ်ပြီး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် ပညာသင်ကြားသော ပထမဆုံး မြန်မာကျောင်းသားတစ်ဦး ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်းအတွက် အဓိက တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သော မော်လမြိုင် တက္ကသိုလ် သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တတိယမြောက် တည်ထောင်သော ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ် ဖြစ်ပြီး ဝိဇ္ဇာဘွဲ့နှင့် သိပ္ပံဘွဲ့များ၊ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့များကို ချီးမြှင့်နိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အဏ္ဏဝါသိပ္ပံဘွဲ့ကို ချီးမြှင့်ပေးနိုင်သော တက္ကသိုလ်အချို့သာရှိရာ မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်သည် တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ဆေးပညာ သင်ယူနိုင်ရန် ရန်ကုန်မြို့သို့ သွားရောက် သင်ယူရန် လိုအပ် လေသည်။
မော်လမြိုင် မိခင်နှင့်ကလေးဆေးရုံကြီး (ခေါ်) အမေရိကန်ဆေးရုံကြီး (ယခင်ကိုလိုနီခေတ် Ellen Mitchell Memorial ဆေးရုံ)
မော်လမြိုင် အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံကြီး
မော်လမြိုင် ခရစ်ယာန် အထူးအရေပြားဆေးရုံ
မော်လမြိုင် တိုင်းရင်းဆေး ဆေးရုံ
ဆောက်သန်းမြန်မာ ယူနိုက်တက် ဘောလုံအသင်း (Southern Myanmar United F.C) သည် မော်လမြိုင်မြို့၏ မြို့ခံအသင်းတစ်သင်း ဖြစ်သည်။ ဆောက်သမ်းမြန်မာ ယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်း၏ အိမ်ကွင်းမှာ ရာမညအားကစားကွင်း ဖြစ်ပြီး မော်လမြိုင်မြို့တွင် အခြေစိုက်သည်။ ဆောက်သမ်းမြန်မာယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်းသည် မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်စတင် တည်ထောင်ခဲ့စဉ်ကတည်းက ပါဝင်ခဲ့သော အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းအသင်းသည် မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တောင်ဘက် ကမ်းရိုးတန်းတစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားပြုသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အင်ဒီယားနားရှိ ဖို့တ်ဝိန်းမြို့ နှင့် မော်လမြိုင်မြို့ တို့သည် ချစ်ကြည်ရေးမြို့တော်သဘောတူညီချက်ထူထောင် ထားရှိပြီးဖြစ်သည်။
နည်းပညာ တက္ကသိုလ် (မော်လမြိုင်)
Holy Family ဝတ်ပြုကျောင်းကြီး
↑ National Telephone Area Codes။ Myanmar Yellow Pages။ 19 July 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 July 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 18 August 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 July 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Zollner, Hans-Bernd (2002). "Germans in Burma, 1837-1945". The Journal of Burma Studies. Northern Illinois University. 7: 34.
↑ Bird, G W (1897). Wanderings in Burma. p. 204.
↑ Meyers, Jeffrey (2010). Orwell: Life and Art. University of Illinois Press. p. 19.
↑ "Here be monsters: Travelling to Ogre Island". The Myanmar Times
↑ Crager, Kelly (2008). Hell Under the Rising Sun: Texan Pows and the Building of the Burma-Thailand Death Railway. Texas A&M University Press. pp. 68–7
↑ "Westward, ho!". Bangkok Post.
↑ Myanmar.com။ 29 September 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar.com။ 13 October 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Fort Wayne Sister Cities to sign Myanmar friendship agreement။ The News-Sentinel (26 January 2016)။ 30 March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မော်လမြိုင်&oldid=730362" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၀၈:၅၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။